09-08-2013 05:41 AM
Originally Posted by parkye
ckaemufydkif;awmh &Srf;rav;udk tpm;rsm;ovdkyJ/ qDvnf; rrsm;ovdk pm;vdkUvnf; aumif;ygw,f/ wpfckyJ [if;&nfenf;\_/
ckwavm &Srf;rav;udk vlajymrsm;aew,f... usaemfvm; pm;jyD;awmh MudKufovdk rMudKufovdkeJY..
ref;av;udk usaemf [dkaeU u a&mufawmh udk,fwufcJhwJhausmif;av; MunfhvdkufOD;rSygqdkjyD; 14ausmif;a&SU jzwfvdkufrS vrf; 80 BuD; jyifaewmawGUcJhw,f/ tJ'Dbuf ra&mufwmMumawmh ckrSyJ odw,f/ b,fuxJu jyifaevJ rodbl;/ aumif;vdkufwm/
ref;av;udk usaemf [dkaeU u a&mufawmh udk,fwufcJhwJhausmif;av; MunfhvdkufOD;rSygqdkjyD; 14ausmif;a&SU jzwfvdkufrS
qkdifqkdif rqkdifqkdif 'DxJrSm twif;0ifygOD;r,f..
14 qkdvkdY jzwfceJ rsufpdxJudk twdwfu ykH&dyfawG wef;pD0ifvmw,fAsKdU...
95^96 avmufwkef;u txu 14 eab;u *syefpwkd; tay: xyfrSm aecJh&ao;w,f..
*syefeJY tusKd;ay;ykHu tJvkdAs...
35-at? 26-bD eJY 20-pD.. ta&SUtaemuf vrf;rBuD;awG...
rEåav;&Jh ESvkH;aoG;aMumvkdY ajymvkdY &EkdifwJh 84 vrf;rBuD;ua&m.. 78 vrf;rBuD;avmuf rpnfum;awmhbl;wJhvm;..
a&Twacsmif;ajrmif;ab;u xD;wkdifav;awGeJY a&mif;cJhwJh xD;wkdifaps;ua&m.. b,fa&mufoGm;NyDwkef;..
em&DpifBuD;xD;xD;rm;rm;&,f.. vrf;[kdrSmzufu wpfcsdefwkef;u emrnfausmfcJhwJh ref;ortoif;pk&Jh cef;rBuD;&,fukdjrifae&wJh ae&mukd aps;csKdajrmufzufrvG,fu xGufvkdufwmeJY jrif;vSnf;*dwfav;&Sdw,f.. wpfa,muf wpfusyfcGJ ESpfusyfeJY jrif;vSnf;ay:wuf&if ]] ykdufusKH;... ykdufusKH;}} qkdwJhtoHeJYtwl.. jrif;uav;&Jh ab;eHyg;u jcLoHvGifvGifav;awG em;axmif&if; yGJukef;a&muf&if qif;usef&pfcJhzl;w,f..
aps;csKd awmifrvG,fu xGufvkduf&if emrnfBuD; t&D;awmif;&kdU bm&kdU tomxm;..
]]OD;umu a': pdef}}wkdYa&m vufzufajcmuf a&mif;rS a&mif;ygao;&Jhvm;...
]]a&T0gjynf}}r,f.. vwfqwfarT;BudKifwJh aumfzDrSKefYeHYav;&SKzkdY tcGifhta&;&SdygOD;rvm;...
]] rav;&Sm;}} r,f 'efaygufukd qdwfom;wkH;BuD;eJY udkuf&ygOD;rvm;...
]]armifudef;}} a&SUuae [kdif;vyfpD;&if bk&m;BuD;a&mufw,f...
[kdzuf wpfjy ESpfjyr,f.. ]]tif;0}} qkdwJh tat;qkdif&Sdw,f...
'defcsOfarT;arG;udk tkef;oD;qHjcpf Ekdif;csif;eJYaomuf&if; ykdwJhtaMuGaphawGudk wHcGefwkdif EGm;ab;rJhpcef;twGuf tvSLaiGxnhfMur,f.. tcka&m &SdMuao;&Jhvm;..
vGrf;w,fref;&,f.. jynfawmfjyefwkdif; ref;qkdwm tcefYoifhOD;rS... tcefYoifhOD;awmh.. tcsdefray;Ekdifawmh..
ref;ajrukd tvGrf;ajy rvnfywf&wm Mumygayghvm;..
95-96 qdkawmY ZD;uGufwdkY vrf;ovm;aewJY tcsdefaygh/
22 rS pD vrf;
35-at? 26-bD eJY 22-pD 19 'D qdkNyD;cGJcJYwm/
uRefaemfwdkYi,fi,fwkef;u 84vrf; 26vrf; eJY 35vrf;awG rSm NrdKYywf&xm;aNy;cJYw,f/pD;zl;w,f&Sdatmif wcgwufpD;zl;w,f/ NrdKYywf&xm;qdkNyD; wu,fawmY rywfygbl;/ aNrmufNyif tqHk; o&Japs;zufa&mufawmY &xm;u *dwfqHk;NyD qufroGm;awmYbl;qdkvdkY 'kwfca&mufcJYzl;w,f/
udkarmif;MuD; ydkufusHL;udk cPcP bmoGm;vkyfygvdrfY/
awmfao;wmaygh wa,muftpdwf ausmufoydwfudkroGm;vdkY/ cdcdcd
tif;0 'defcsOf?EdkYcsOfqdkifu 84eJY 29 a'gifhrSmyg/ t&ifuvrf;80zufrSmqdkifcGJ&SdcJYayr,fh ckawmYr&SdawmYbl;xifwmyJ/
uRefaemfu OD;vSxGef;qdkifu yJokwfudkydkMudKufw,f/
aemufwcgbef;ausmfNyefvm&if csdef;NyD; oGm;Mu&atmifvm;/ ref;av;zufawmYuRefaemfYwm0ef,lNyD; tukefvdkufydkYay;r,f/
၁၃ ကျောင်း ဆရာ ကန်တော့ပွဲရှိတယ်လို့ ကျောင်းရှေ့က ဖြတ်တော့် တွေ့တယ်။ သွားတက်ရကောင်းမလား။ မတက်ရကောင်းမလား မဝေခွဲနိုင်သေးဘူး။ ဖြစ်စေချင်တာတစ်ခုက အခု facebook က လူတိုင်းမှာ ရှိတော့ 13.behs ကို official ထောင်ထားသင့်တယ်ထင်တယ်။ အဲဒါမှ ဘာဆို ချက်ချင်းသိမှာ။ အခု လည်း ကျောင်းရှေ့က ဖြတ်သွားပြီး ဖတ်မိလို့သာပ။ မဖတ်မိရင် သိတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူး။
၁၃ ကျောင်း - ကျောင်းသား/သူဟောင်း ၊ ကိုကိုမမများနှင့် သူငယ်ချင်းများ... တစ်ခုခုဆိုပြောပေးပါဦး။ အတူသွားမယ့်သူမ၇ှိလို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။
အဲ တိုက်ကြီးမောင်တော့ မကန်တော့ဘူးနော်။ ဒီက စိတ်ကြီးတယ်။ ခိခိ။
မန္တ﻿လေး ဖုန်﻿တင်﻿﻿နေတယ်﻿။ ဖုန်﻿လာခါတာ။ ဖူးဖူး။
မိုးကလဲရွာတာ။ မ﻿နေ့က စရွာတဲ့ စ﻿နေမိုး တစ်﻿ပတ်﻿﻿လောက်﻿ မစဲဖူးဆိုရင်﻿﻿တော့သွားပြီ။
လမ်း﻿ပေါ်မှာ မန်းသားတို့ထုံးစံအတိုင်း ﻿တော်﻿ရုံ အပြင်﻿မထွက်﻿ကြ﻿တော့ လူ﻿တွေလည်း သိပ်﻿မ﻿တွေ့ဖူး။ ဥပုဒ်﻿﻿နေ့လည်း ဖြစ်﻿တာကိုး။
ဒီအချိန်﻿မှာ ရည်းစားသတိရလိုက်﻿ မန်းကျု့ပစ်﻿﻿တွေ သတိရလိုက်﻿နဲ့။
﻿အော်﻿။ ငါလည်း ဘာလိုလိုနဲ့ Cupid ကို﻿တော်﻿﻿တော်﻿ ခင်﻿တွယ်﻿လာတယ်﻿ကိုး။
Originally Posted by YTN
azhbkwfrSm &SmMunfhyg/ 13 txu&JU taumifh&Sdygw,f/ owif;tcsuftvufrsm;eJU "gwfyHkrsm;udk wifxm;avh&Sdygw,f/
udk0ufBuD;wdkY ygw,fxifw,f/ emhtara&m ... emhtaza&m .. ta':awG? OD;av;awGa&m .. ema&m ykef;aew,f .. [d[d
ဒီနေ့ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းနဲ့ ထိုင်းအမျိုးသမီးအသင်းတို့ရဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မန်းလေးမြို့ထဲ ဘာတွေလှုပ်ရှားနေကြသလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်
မနေ့ကတော့ ဘောလုံးပွဲလက်မှတ် တန်းစီဝယ်နေကြတာ ဂေါက်ကွင်းနားမှာ တွေ့ခဲ့တယ်။
မန်းလေးဖက်လှည့်လိုက်ရအောင် ... သုဝဏက ခွာတော်မူမယ် ...FM Radio .... BB FM Radio ...FM Radio .... BB FM Radio ...
Let's Rock !!!!!!! <:-P
မန်းလေးကိုရောက်ခဲ့ပြီအချစ်ရေ ... မန်းလေးကိုတွေရပြီလေ မန်းလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မန်းလေးကိုမော့သောက်ကြည့်တော့
သွေးထဲစီးဆင်းသွား ....အဆွေးတွေသိမ်းထားပြီကွာ ... မန်းလေးရေ ရနံ့နဲ့သင်းပျံ့လို့သွား အလွမ်းတွေလွင့်ပြစ်လိုက်တော့
ရွှေရောင်ဒီမန်းလေးပါပဲ.... ရင်ထဲအမောတွေပျောက် အလွမ်းများငြိမ်းမယ်ဒီကဗျာပဲ ...ငါ့ရင်ထဲမင်းဝင်ပြီး အဓိပါယ်ဖတ်ကြည့်တော့
အချစ်တွေရှိတယ် အတိအကျပေါ့ ..... တမာရနံ့တွေသင်းနေတဲ့အညာလမ်းဘေးတစ်လျှောက် ... လန်းဆန်းသွားမယ်အင်ဂျင်ထဲ
ကလိုပဲ မီးတွေထဲ အဆိုးတွေဖြတ်ခဲ့လဲ ...ရင်ထဲအမောတွေပျောက် ....
မန်းလေးမှာ နန်းရှေ့ကိုရောက်ခဲ့ .... မန်းလေးမှာ ကျုံးဘေးရောက် မန်းလေးဟာအပြောင်းအလဲမများဘူး .. မန်းလေးဟာ အလွမ်းအဆွေး
တွေမပေးဘူး ... မန်းလေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်အုံး .... ရနံ့တွေစွဲသွားပြီပေါ့ ... အားလုံးကိုမေ့လို့ ...အကောင်းဆုံးတွေပေးလို့
မန်းလေးဟာ ငါ့မြို့ပဲ ..... ရွှေရောင်ဒီမန်းလေးပါပဲ....